अकस्मात रगतमा चिनीको मात्रा कम भएमा के गर्ने ? | Diet Khabar
रोग अनुसारको खानपानविज्ञको सुझाव
भिस्मा राई, डाइटिसियन
कहिलेकाहि खाना खाएको लामो समय हुदा वा अन्य कुनै कारणले एकदमै कमजोर भएको, रिंगटा लागेकोजस्तो भइरहेको हुन सक्छ । रगतमा चिनीको मात्रा कम भएर हुने यस्ता समस्या स्वस्थ व्यक्तिको तुलनामा मधुमेह भएकाहरुमा कयौ गुणा धेरै हुन्छ र तत्काल उपचार गरिएन भने ज्यान पनि जान सक्छ ।
रगतमा चिनीको मात्रा हुनु पर्ने भन्दा धेरै कम भएर हुने यस्तो अवस्थालाई मेडिकल भाषामा हाइपोग्लाइसेमिया भनिन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा ७० एम जि प्रति डिएल (mg/dl) भन्दा कम भएमा हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ । यसलाई बेवास्ता गरे ज्यानै पनि सक्छ ।
सामान्यतया मधुमह भएका व्यक्तिहरुमा तलका कारणले हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ
इन्सुलिन वा औषधिको मात्रा धेरै भएमा वा सो अनुसार खानाको मात्रा अपुग भएमा
इन्सुलिन वा औषधि खाइसके पछि खाना खान ढिलो भएमा वा भोकै बसेमा
अचानक शारिरिक व्यायम सधै भन्दा धेरै भएमा
बिरामी भएर खाना नरुचेमा
रगतमा चिनीको मात्रा कम हुँदा देखा पर्ने लक्षणहरु प्रत्येक व्यक्तिमा फरक हुन्छ । एउटै व्यक्तिमा पनि सधै एउटै लक्षण देखा नपर्न सक्छ । त्यसैले मधुमेहीले घर मै ग्लुको मिटरको सहायताले नियमित सुगर जाँच गरिरहनु पर्दछ । सामान्यतया हाइपोग्लाइसेमिया हुदा तलका लक्षणहरु देखिन्छन :
अत्यधिक भोक लाग्नु
कमजोरी महशुस हुनु
चिटपिट पसिना आउनु
मुटुको ढुकढुकी बढ्नु
रिंगटा लग्नु आखा अगाडी अध्यारो हुनु
आँखा धमिलो हुनु बेहोस होला जस्तो हुनु
यदि यस्ता लक्षणहरु देखिएमा तुरुन्त उपचार गरि हाल्नु पर्दछ अन्यथा स्थिति गम्भिर बन्न सक्छ ।
मधुमेहको बिरामीले चिनी, ग्लुकोज, क्यान्डी, चकलेट जस्ता गुलियो पदार्थ अनिवार्य साथमा राख्नु पर्छ ।
यदि रगत मा चिनीको मात्रा कम भएको महसुस भएमा तुरुन्त कार्बोहाईड्रेटयुक्त खानेकुरा जस्तै: चकलेट, ग्लुकोज वा जुस खानुपर्छ ।
रगतमा चिनीको मात्रा सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि पुन हाइपोग्लाइसेमियाबाट बच्न नट्स वा खाना खाने । चकलेट वा गुलियो बस्तु मात्र खाएर बस्नु हुदैन । त्यस्ता बस्तुले क्षणिक समय सम्म मात्र हाइपोग्लाइसेमियाबाट बचाउँछ । दीर्घकालीन समाधान भनेको समय मिलाएर सन्तुलित खाना खाने र नियमित औषधीको उचित प्रयोग नै हो ।
रगतमा चिनीको मात्रा कति छ भनेर समय समयमा घरमै ग्लुको मिटरले नाप्ने ।
यदि रगतमा चिनीको मात्रा सामान्य अवस्थामा नआएमा तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्ने ।
प्रत्येक दिन ठिक अनुपातमा ४/५ पटक एकै समयमा तालिका मिलाएर खाने
कहिले धेरै कहिले थोरै वा नखाई भोकै नबस्ने ।
औषधि वा इन्सुलिनसंग खानाको समय र मात्रा सधै मिलाउनु पर्दछ ।
आफ्नो सम्बन्धित चिकित्सकलाइ सम्पर्क गरेर मात्र औषधि फेरबदल गर्ने, आफुखुसि वा सुने जानेका आधारमा औषधी र खानपान परिवर्तन नगर्ने ।
काम वा व्यायम धेरै भएमा त्यही अनुसार खानाको मात्रा मिलाउनु पर्दछ । (डाइटिसियन, काठमाडौ मेट्रो हस्पिटल)
Previous articleपोषणसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका जारी
Next articleअजिनामोटो खानु कति सुरक्षित ?
रोग अनुसारको खानपान
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने?
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म सयौंको ज्यान लिइसकेको...
editor diet - August 22, 2020 0
लक डाउनको बेलामा कस्तो खानपानशैली उपयुक्त ?
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापि महामारीका कारण ३ सातादेखि भईरहेको लकडाउनसँगै...
diet-admin - April 23, 2020 0
कोरोना महामारीमा मधुमेहका बिरामीलाई डाइटिसियनको सुझाव
यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण अर्थात कोभिड १९ ले...
diet-admin - April 23, 2020 1
लकडाउनमा बच्चालाई सिकाउनैपर्ने खानपानसम्बन्धी व्यवहार
दिपेन्द्र भट्ट कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा कम गर्न भनि गत...
diet-admin - April 4, 2020 0